Taariikhda Diinta ee Tower Hamlets.
Guji halkan si aad u heshid faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda diinta ee Tower Hamlets.
Diimaha iyo dhaqanka kala duwani waxay in badan qayb ka ahaayeen tilmaanta Tower Hamlets. Kacaankii badhtamahii qarnigii 16aad wuxuu ka dhigay Protestantismka mid xoogan. Bariga London waxay noqotay bartooda xoogan ee aan muranka lahayn. Egland Baptist Chapelkeedi ugu horyayna waxaa laga aasaasay halkan badhtamahii 1612kii.
Kiniisada Christ (Christ Church) Spitalfields (1714 – 29) waxaa loo dhisay si ay uga hortagto murankii iyo si ay ugu adeegto bulshada sida xooga leh u koraysa. Bilawgii 1680dii cadaadiskii Protestanka ee Faransiiska ayaa horseeday qoxootigii Huguenot in ay yimaadaan England iyagoo tiro badan ah taariikhdoodiina waxaa laga dareemi karaa ilaa hadda farshaxanka dhismaha ee Spitalfields.
Yuhuud badan oo ah Sephardi( waa yuhuuda asal ahaan ka soo jeeda Iberian), ayaa laga soo caydhiyay guryohoodii ku yaalay Spain iyo Protugal waxaanay yimaadeen Bariga London bilowgee 1650nadii. Dhulkii xabaalahe ee yuhuuda ee ugu horeeyay ayaa laga aasaasay ‘the Old Velho Sephardi Cemetery’, dariiqa Mile End Road sanadkii 1657kii.
Badhtamihii 188kii falal xunxun oo ka lid ah ayaa lagula kacay shacabka Yuhuuda Boqortooyada Ruushka, kaas oo loo yaqaanay pogroms (waa xasuuq la habeeyay oo lagula kaco shacab la ga tiro badan yahay, gaar ahaan shacabkii Yuhuuda ahaa ee ku noolaa Ruushka xiligaa), taasi waxay keentay imaansho tiro badan oo ah Yuhuuda Ashkenaiga. Tiro-koobkii shacabka Yuhuudda ee Bariga Londona waxa uu sare ugu kacay in ah 4000 sanadkii 1881kii ilaa in ka badan 50,000 sanadkii 1901kii. Ilaa 150 synagogueg ayaa la aasaasay xiligaas, fikradii ahayd Yuhuudii East End (East End waa meel ku taala Bariga London) ayaa la gogol dhigay.
Celcelis ahaan wabiga Thames waxay Tower Hamlets u ahyd goobta ay ka soo galaan dad badan oo badaha iskaga goosha. Badmareenadii Eeshiyaanka ahaa ee loo yaqaanay ‘lascars’ waxay bilaabeen inay soo gaadhaan London bilawgii 1840kii, waxaana jirta xaqiiqo ah in Bulsho Muslim oo Bangaali ahi ay jirtay intii ka horaysay 1850kii. Xaafadu waxay martay duruuf xun Dagaal Waynihii Labaad ee Aduunka, laakiin jiritaankeeda taariikheed, waxay sii waday soo dhawaynta dadyawga kala caqiidada iyo dhaqanka ah. Dad cusub oo ka kala yimi Bangaldhesh iyo qoxooti Soomali iyo Vietnam ah ayaa hoy ka samaystay deegaankan. In ka badan kala badh dadwaynaha ku nool Tower Hamlets waa dad aan ahyn Cadaanka Britishka ah oo ah dadka laga tirada badanyahay. Sadex dalool isir ahaan waa Bangaladheshi, kuwaasoo kalabadhi ay da’doodu ka yartahay 20 sanadood. Boqolkiiba lixdan dadka cadaanka ah da’doodu waxay ka wayntahay 30. In ka yar 2000 oo ah deegaan Yuhuud ah ayaa la sajilay tirakoobkii sanadkii 2001kii. Imikana waxaa si fiican u shaqeeya shan synagogues. Intaa waxa la garab dhigi karaa 27 masaajid oo la tiro koobay. Waxa kale oo jira meelo cusub oo wax lagu caabudo oo ay leeyihiin Pentecostal(waa mad-hab ah masiixi) oo laga ag aasaasay Kiniisadihii iyo Chapelskii.